Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားခန်းသဘောတူညီချက်မနက်ဖြန်သင်္ဘောများ
12 / 09 / 2021 12 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 317 Views စာ0မှတ်ချက် 30389 Fuzzy & မှိုပလက်ဖောင်း, 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, 5006746 လွှဲသင်္ဘောစီးနင်း, စာချုပ်, အပေးအယူ, အခမဲ့ LEGO, Ideas, Lego, lego အပေးအယူ, Lego Ideas, Lego ကမ်းလှမ်းချက်, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Lego စူပါမာရီယို, Lego လွှဲသင်္ဘောစီးနင်း, ပေးကမ်း, ကမ်းလှမ်းချက်များ, စူပါမာရီယို, လွှဲသင်္ဘောစီး
အခမဲ့ Lego Ideas 40487 ရွက်လွှင့်စွန့်စားမှုမနက်ဖြန် online store မှာပြန်ရောက်ပြီ၊ ဆိုလိုတာကဒါကအခြားပြန်လာကမ်းလှမ်းမှုအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ဘဲ။
စက်တင်ဘာ ၁၃ တွင် 13 Sailboat Adventure သို့ပြန်လာလိမ့်မည် LEGO.comစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း၊ ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းသောအခါ သြဂုတ်လတွင်။ The Lego အုပ်စုတစ်ခုသည်လက်ခံရရှိသော်လည်းလက်ဆောင်ပေးရန်ပုံစံကျန်ရှိနေသေးသည် အစောပိုင်းကာလ.
minifigures နှစ်ခုနှင့်aminifigure အတိုင်းအတာအတိုင်းအပန်းဖြေခြင်းတို့ဖြင့် classic အောင်နိုင်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ရွက်လွှင့်သောသင်္ဘောဖြစ်သည် 'အိပ်မက်အားလပ်ရက်' ပြိုင်ပွဲ, Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားခန်းသည်သင်ဖတ်နိုင်သလောက်တန်ဖိုးကြီးမြင့်မားသောစံပြပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်.
သို့သော်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည် Lego Ideas ပရိုမိုးရှင်းဆိုသည်မှာပြန်လာသောစက်တင်ဘာအပေးအယူများနောက်ထပ်ကုန်ဆုံးတော့မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ယနေ့သည် VIP အဖွဲ့ဝင်များအတွက်£ 85 / $ 85 / € 85 ကျော်အော်ဒါများနှင့် Swing Ship Ride GWP ကိုလက်ထဲယူရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ထိုစျေးနှုန်းသည်ယူရို ၂၀၀ / ဒေါ်လာ ၂၀၀ / ပေါင် ၂၀၀ ထက်သိသိသာသာသေးငယ်သော်လည်း၊ ပြင်ဆင်မှုပိုကြီးသောမည်သူမဆို ၀ ယ်ရန်ကလစ်ရန်တစ်ရက်ပိုစောင့်ချင်သည်။
မည်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမဆိုအခွင့်ကောင်း ယူ၍ ဆုံးဖြတ်ပါကအခမဲ့ဖြစ်သည် Lego စူပါမာရီယို 30389 Fuzzy နှင့် Mushroom Platform Expansion Set ကို£ 40 / $ 40 / € 40 ထက်ပိုသောအော်ဒါများနှင့်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင်ဝယ်နိုင်သရွေ့နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူစုလိမ့်မည်။ စူပါမာရီယို အစုံ။ ဤသဘောတူညီချက်သည်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိကြာရှည်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၄၀၄၈၇ ရွက်လွှင့်သင်္ဘောစွန့်စားခန်းသည်ကြာရှည်မည်မဟုတ်။
← Lego Batman ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ ၁၉၈၉ Batmobile ရောင်းထွက်ပြန်သည်
LEGO 71395 Super Mario 64 ၏ Question Mark Block ၏ဇာတ်ကောင်များ →